Mareykanka oo ciidamo dheeraad ah u diraya Sacuudi Carabiya - BBC News Somali
Image caption Pentagon ayaa sheegay ciidamada dheeraadka ah inay Sacuudi Carabiya gacan ka siinayaan weerarrarada Iran uga iman kara
Wuxuu intaa ku daray ciidamada ay Washington u direyso sacuudiga in jawaab looga bixinayo 'khatarta gobolka soo food saartay', isla-markaana boqortooyada Sacuudi Carabiya looga ilaaliyo 'weerarrada gardarrada ay iiraan ku soo qaaddo'.
"Ciidamada dheeraadka uu Mareykanka u dirayo gacan siinta boqortooyada Sacuudi Carabiya oo 3,000 ah oggolaashaha in ciidamadaasi la dirana la bixiyey bishi hore" ayuu yiri afhayeenka Pentagon Jonathan Hoffman.
Maxamed bin Salmaan mar uu weerarkaasi ka hadlayeyna waxaa uu yiri: "Haddii ay beesha caalamka ay tallaabbada adag oo looga hortagayo gardarrada cad ee Iiraan ay qaadi weydo waxaan arki doonnaa saameyn iyo khatar badan oo soo food saarta danaha dunida."
Hase yeeshee waa ay diidday iney iyadu weerarkaasi geysatay.
Wuxuuna sheegay 'dabeecadda balaaya aloosidda' ayaa noqotay mid uu dalka iiraan ugu jiro inuu xasiloonidarro uu ka abuuro bariga dhexe si ay u carqaladeyso dhaqaalaha dunida.
Weerarki Sacuudiga lagu qaaday
Dhanka kale xeeldheereyaashu waxay baarayaan bal in weerarradaasi ay soo qaadday Iran iyo in ay soo qaadeen maleeshiyadka Shiicada ah ee gacan saarka la leh Iran ee ku sugan dalka Ciraaq - ayagoo adeegsanaya gantaalaha Kuruuska, sida uu ku warramay wargayska The Wall Street.
Mike Pompeo oo bartiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay ayaa sheegay in uusan hayn "wax caddayn ah" oo muujinaysa in weerarka laga soo qaaday dalka Yemen.
Waxa uu weerarka ku tilmaamay "mid aan horay loo arag oo lagu qaaday warshadaha ugu waaweyn caalamka ee Tamarta laga helo".